AC MILAN VS BODO/GLIMT: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan | Hadalsame Media
Home Ciyaaraha AC MILAN VS BODO/GLIMT: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan
(Milano) 24 Sebt 2020 – Waxaa caawa kulan hal lug ah oo loogu soo baxay bug-baxda EL ciyaaraya kooxaha AC Milan iyo Bodo/Glimt oo ku ballansan gegada San Siro oo cidlo ah, saacadda Yurubta dhexe marka ay tahay 20:30.
Dhanka Milan: Pioli ayaa lagu wadaa inuu dheelsiiyo isla 11-kii kasoo badisay kooxda Shamrock Rovers, iyadoo uu Saelemaekers ka dheelayo garab weerarka bidix si ka duwan booskiisa saxda ah ee midigta, si uu u bedelo laacibka ganaaxan ee Ante Rebic.
Dhexdu waa labada tiir ee Franck Kessie iyo Ismael Bennacer, iyadoo Sandro Tonali uu gadaal kasoo gelayo. Waxaa ka horreeya 3-da Castillejo-Calhanoglu-Saelemaekers oo rasaasta siinaya Zlatan Ibrahimovic. Brahim Diaz ayaa la hadal hayey inuu galayo booska Castillejo, balse sidaa uma badna.
Dhanka Bodo/Glimt: Macallin Knutsen ayaa dheelaya 4-3-3. daafacuna waa afarta Sampsted-Lode-Hoibraten-Bjorkan iyo qabtaha Haikin. Dhexda waxaa haya Berg, oo garbaha ka joogaan Fet iyo Saltnes. Weerarka waxaa garbaha u taagan Zinckernagel iyo Hauge, oo hubaynaya Boniface oo weerar dhexe ah.
Previous articleQiimaynta cududda ciidamada caalamka & halka ay Somalia sanadkan ka gashay
Next articleMAAREYNTA WAQTIGA: Afar qodob oo muhim u ah sida waqtiga looga faa’iidaysto sida ugu fiican